रञ्जित रायले नयाँदिल्लीबाट दिए नेपालबारे सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति - Dainik Nepal
रञ्जित रायले नयाँदिल्लीबाट दिए नेपालबारे सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति
दैनिक नेपाल २०७४ वैशाख ८ गते ७:०२
काठमाडौं, ८ वैशाख । नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै जटिल रह्यो, जतिवेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए, रणजित राय । भूकम्पको मार खेपिरहेका नेपाली जनतामाथि भारतको नाकाबन्दी लाग्दा राय खुबै आलोचित भए । नेपालको संविधान जारी हुँदा उनले दिएका कतिपय अभिव्यक्तिप्रति नेपालीले तीतो ओकले । साढे दुईवर्षे कार्यकालमा नेपाल बसाइ उनलाई कस्तो लाग्यो ? भोगाइ कस्तो रह्यो ? नयाँपत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले नयाँदिल्लीबाट लेखेका छन् ।
राय नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर र कठिन दुवै भएको समयमा राजदूत भए । संयोगबस भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईपटकको नेपाल भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धको सहज समयमा भएको थियो । संविधान जारी भएसँगै सम्बन्धमा देखिनेगरी नै दरार आयो । नेपालले नाकाबन्दीको सामना गर्नुप-यो । त्यसपछि सरकार परिवर्तनका शृंखलामा भारतीय भूमिकाको चर्चा भयो । नेपालमा संविधान जारी गर्ने वेलाको राजनीतिक उतारचढावको प्रत्यक्ष साक्षी मात्र होइन, संविधान जारी भएपछि बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध र नाकाबन्दीको उनी साक्षी र स्टेकहोल्डर रहे । राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमण (१७ वर्षपछिको राजकीय भ्रमण) उनकै कार्यकालमा भयो । यो संयोग थियो । हरेक संकटमा राजदूत रायको बाहिरी प्रस्तुति ‘कुल’ देखिन्थ्यो । उनले आवेगलाई अगाडि आउन दिएनन् । यो बीचमा आफ्ना चर्का आलोचकसँग पनि भेटे, सम्वाद कायम राखे । उनी जुनसुकै वेला नेताहरूसँग सम्वादमा रहे । भारतीय भूमिकाको कठोर आलोचना गर्ने सबैसँग उनले व्यक्तिगत रूपमा घनिष्ठता कायम गरे ।